काेराेना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण कक्षा १ देखि ९ सम्मको परीक्षा अगाडि नै सारियो । ११ चैतदेखि कोरोना भाइरसका कारण विद्यालयका ढोका बन्द छन् । ७० प्रतिशत हिस्सा सामुदायिक र ३० प्रतिशत हिस्सा निजी विद्यालयले ओगटेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी लगानी हुन्छ । सरकारले बन्दाबन्दीको समयलाई बिदा मानेर कर्मचारीको सेवा सुविधा नरोक्ने भनेको छ । तर निजी विद्यालय विद्यार्थीको शुल्कबाट नै चलेको हुन्छ । त्यसैबाट शिक्षक कर्मचारीको तलब दिइएको हुन्छ ।
चार महिनादेखि निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । निजी विद्यालयमा झण्डै साढे २ लाख शिक्षक र कर्मचारी छन् । सञ्चालकहरू शुल्क नउठेका कारण तलब दिन नसकेकाे बताइरहेका छन् ।
पुसदेखि पाएनन् निजीका शिक्षकले तलब
विद्यालय सञ्चालालमा कठिनाइ भएपछि प्याब्सन र एनप्याब्सनले तिर्न सक्ने अभिभावकलाई बाँकी रहेको शुल्क तिर्न र विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्न अपिल गरे । तर, तत्काल शुल्क नलिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्यो ।
सरकार र निजी विद्यालयबीचमा समन्वय नहुँदा समस्या झन् बल्झँदो छ । यसले गर्दा विद्यार्थी र अभिभावक अलमलमा छन् । शुल्क नलिए निजी विद्यालय कसरी चलाउने भनेर विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रश्न गरेका छन् ।
अभिभावकलाई असर नपर्ने गरी विद्यालय खर्च, शिक्षक र कर्मचारीका लागि मात्र भए पनि शुल्क लिन पाउनुपर्ने विद्यालय सञ्चालकहरूको माग छ ।
शुल्कका विषयमा निजी विद्यालयका धारणा भने यस्ता छन्ः
निजीको अरु स्रोत छैन, शुल्कबाटै चलाउने हो
टीकाराम पुरी, अध्यक्ष, प्याब्सन
कोरोना महामारीपछि पनि अनलाइन, रेडियो, टेलिभिनलगायतका माध्यमबाट विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छौँ । वर्षभर पढाउने भनेको जम्मा १ सय ८० दिन हो । त्यो पूरा गर्ने हो । त्यसका लागि शिक्षकहरूले अरु समयभन्दा बढी मिहिनेत गर्नुभएको छ । तर, तलब दिन सकिएको छैन ।
काम गर्ने पक्षलाई तलब नदिएर भोकभोकै राख्नुपर्ने स्थिति बनाउन सकिँदैन । निजीको अरु स्रोत पनि छैन । शुल्कबाट नै चलाउने हो । बिजुली, टेलिफोन, पानीको न्यूनतम शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, हामीले पनि न्यूनतम शुल्क भनेका हौँ ।
विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्, स्कुलले शुल्क, शिक्षक–कर्मचारीले तलब
१२ महिनाको शुल्क लिनुपर्ने हो । अहिले ११ महिनाको लिने भनेका छौँ । तर, शिक्षाविरोधी तत्त्वहरूले उल्टै खेदो खने । अब अनलाइन कक्षा पनि बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।
मासिक शुल्क उठाउनैपर्छ
ऋतुराज सापकोटा, अध्यक्ष, एनप्याब्सन
मासिक खर्च व्यवस्थापनका लागि मासिक शुल्क उठाउनैपर्छ । अभिभावकलाई सजिलो बनाएर विस्तारै तिर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो अभिभावकसँग मिलेर गर्ने कुरा हो ।
विद्यालयले कसरी घरभाडा तिर्ने ? शिक्षक कर्मचारीको तलब कसरी दिने भन्नेबारे अभिभावकलाई पनि थाहा छ । तर, सरकारले तयारीविना नै शुल्क नउठाउने पपुलिस्ट कुरा गरेकाले समस्या भएको हो ।
अभिभावकलाई छुट दिन सकिन्छ । यो समयमा यातायात, खाना खाजा, ल्याब, लाइब्रेरीलगायतका शीर्षकको शुल्क नलिन सकिन्छ । तर, मासिक शुल्क भने उठाउनैपर्छ ।
निजीलाई दातृ निकायबाट सहयोग आउँदैन
ईश्वर अधिकारी, संस्थापक, पाठशाला
यो महामारीमा पनि हामीले काम गरेका छौँ । रोकेका छैनौँ । अनलाइन वा कुनै न कुनै माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिएका छौँ । निजीलाई कुनै दान वा दातृ निकायबाट सहयोग आउँदैन ।
विशुद्ध विद्यार्थीका अभिभावकले तिरेको शुल्कबाट विद्यालय सञ्चालन हुने हो । शुल्क नउठेपछि कसरी घरभाडा तिर्ने ? कसरी शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिने ?
हामीले पनि समाजकै लागि काम गरेको हो भनेर राज्यले बुझेको देखिएन । निजी भनेको नाफा कमाउने मात्र भनियो । तर, निजीले पनि समाजकै लागि काम गरेको हो । निजीमा देखिएको सङ्कट राज्यले खोलिदिनुपर्छ । विद्यालयलाई टिकाउने गरी आफ्नो काम गर भनेर राज्यले निर्देश गर्न सक्नुपर्छ ।
नियमअनुसार शुल्क लिनुपर्छ
मधु लोहनी, निर्देशक, सुदेशा स्कुल
विद्यालयमा सञ्चित रकम पनि छैन । खर्च भइरहेको छ । अहिले ऋण र सरसापट गरेर निजी विद्यालय चलिरहेका छन् । दायित्व सिर्जना भइरहेको छ । तर बन्द रहेका कारण भुक्तानी गर्न सकिएको छैन ।
निजी विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो : आफूखुसी शुल्क नलिनुहोस्
दायित्व झन् बढेर गएको छ । विद्यालय शिक्षालाई शिक्षा ऐन २०२८ ले चलाएको छ । अर्को शिक्षा नियमावली २०५९ मा आएको छ । त्यो नियमावलीले थप व्यवस्थित बनाएको छ । नियमावलीभित्र निजीको शुल्कको विषय पनि छ । अनुसूची २२ को ‘त’ मा सामुदायिकको शुल्क छ भने अनुसूची २२ कै ‘छ’ मा संस्थागत विद्यालयको शुल्कको फर्मुला छ ।
त्यस्तै, अनुसूची २२ को ‘ख’ ले विद्यालयहरू कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने आर्थिक मापदण्ड तय गरेको छ । त्यसैका आधारमा शुल्क लिने हो । नियमअनुसार विद्यालयको प्रत्येक वर्ष लागत गणना गरिन्छ ।
विद्यालयका शिक्षक/कर्मचारीको तलबमा ४२ प्रतिशत, शिक्षककै वृत्ति विकासमा १८ प्रतिशत, घरभाडा वा बैंक ब्याजमा १४ प्रतिशत, छात्रवृत्तिमा १० प्रतिशत, मसलन्दमा ७ प्रतिशत खर्च र ९ प्रतिशत संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि भनिएको छ ।
सञ्चालकलाई नाफा हुने भनेको ९ प्रतिशतबाट हो । यही आधारमा सम्पूर्ण शुल्क कसरी लिने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । यो १ सय प्रतिशतलाई १२ महिनामा विभाजन गरेर महिना महिनामा शुल्क उठाउन भनेको छ । यो नियम कहाँ बिग्रेको हो ? बिग्रेको ठाउँमा सच्याएर सहज ढङ्गबाट शुल्क उठाउनुपर्छ ।
शुल्क नलिए शिक्षक कर्मचारीको खर्च राज्यले तिर्नुपर्छ
डा. देवराज पनेरु, प्रिन्सिपल, ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट
निजी स्कुल कलेज चल्ने भनेको शुल्कले नै हो । अहिले भौतिक रूपमा स्कुल कलेजमा आएर पढ्ने अवस्था छैन । अनलाइनको माध्यमबाट भइरहेको छ । यो समयमा यातायात, लाइब्रेरीको प्रयोग भएको छैन । यी सेवाको शुल्क स्कुल कलेजले लिन हुँदैन ।
अनलाइनबाट शिक्षक कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई तलब त दिनुपर्‍यो । अभिभावकलाई पनि मार नपर्ने र स्कुल कलेजलाई पनि भार नपर्ने गरी शुल्क लिन सकिन्छ । यदि शुल्क नलिने हो भने शिक्षक कर्मचारीको खर्च राज्यले तिर्नुपर्छ ।
राज्यलाई विश्वास नगरेर निजीमा पढाएका हुन्
सुरेन्द्र सुवेदी, प्रिन्सिपल, काठमाडौं मोडेल कलेज एन्ड सेकेन्डरी स्कुल
शुल्कका विषयमा केही अफवाह र भ्रमहरू पनि छन् । स्कुल/कलेजले १२ महिनै सहयोग गरेको हुन्छ । फिजिकल कक्षा हुँदा फिजिकल, फिजिकल नहुँदा अनलाइनबाट पनि सहयोग गरेका छन् ।
अहिले पनि विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तर भइरहेको छ । रोकिएको छैन । त्यसैले शिक्षकहरूको सहभागिता रहन्छ । शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिनैपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तर भएको छ भने अभिभावको पनि सहयोग हुन्छ ।
राज्यलाई विश्वास नगरेर निजीक्षेत्रमा इच्छाले आएका हुन् । नत्र सरकारी विद्यालय पनि थिए । निजी विद्यालयले पनि अहिलेको स्थितिमा राज्य र समाजप्रतिको उत्त्रदायित्व के गर्दा वहन हुन्छ, त्यो गर्न तयार छन् ।
अभिभावकलाई छुट दिन सकिन्छ । खर्च नभएको चिजको नलिन सकिन्छ । त्यसैले सम्पूर्ण भार अभिभावकलाई पनि हुनु हुँदैन, विद्यालयलाई पनि हुनु हुँदैन, ब्यालेन्समा हुनुपर्छ ।
एक महिनाको छुट
ईश्वरी लामिछाने, प्रिन्सिपल, अरुणिमा शैक्षिक प्रतिष्ठान
सरकारले पनि एक महिनाको छुट गर्न भनेको छ । सबै विद्यालयले त्यसलाई पालना गर्दा राम्रो हुन्छ । अहिले अनलाइन कक्षा चलिरहेको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । पछि सार्वजनिक बिदालाई कटाएर कोर्स पूरा गर्न सकिन्छ ।
वैकल्पिक शिक्षण हल्लै बढी : विद्यार्थी ७० लाख, पढ्ने सय जना !
अनलाइन कक्षाको समयमा शुल्क र पछिको शुल्कमा केही फरक गर्न सकिन्छ । यसको नयाँ मोडेल बनाएर जान सकिन्छ । सबैभन्दा राम्रो भनेको ११ महिनाको शुल्क लिँदा उपयुक्त हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १५, २०७७, १५:२७:००
दिनेश गौतम Journalist of Nepal